Johnson 10 HP Seahorse Akụ-Up Project | Outboard Boat Motor Mmezi
Johnson 10 HP Seahorse Akụ-Up Project
Ị nwere ike ugbu a abanye na na gị Facebook akaụntụ.
osụk site Matt on Tọs, 06 / 06 / 2019 - 20: 05
Ihe magneto efere maka ọdịda ọdịda na flywheel
Daalụ maka iwepụta oge ịmepụta usoro ntụziaka iji kwado na mpụga ochie. M na-anọchi ihe, mgbakwunye na condensers na 1958 Johnson 10hp na-esote usoro gị maka ịtọ ntọala. Ọ bụrụ na m tinye cam na Top akara na ihe na-emeghe ka .20 ma wepụzie ikiri ahụ, kwekọọ na igodo, akara ahụ na-agagharị na m ga-eji dozie isi ihe abụghị ebe dị nso na akara abụọ na plasta magneto. Enwere m ihe magneto efere (dochie nkwụnye ntinye) ma mezie ya ọzọ, ọ ga-eme ka efere ahụ laghachi azụ na ịgbaso otu usoro? Ma ọ bụ kwekọrọ na otu akara?
osụk site ttravis on Tọs, 06 / 06 / 2019 - 23: 02
Na zaghachi Ihe magneto efere maka ọdịda ọdịda na flywheel by Matt
Ihe ngosi Magneto plate ......
Echere m na enwere otu ụzọ iji tinye plasta magneto. Enweghị mgbanwe.
E nwere ederede abụọ m mere maka usoro nkwụsị. Emere m otu maka 3.0 Evinrude na onye ọzọ maka 5.5 Johnson. M dere ha n'oge dị iche iche, ma ha na-akwado ibe ha, ya mere ana m atụ aro ka ị gụọ ha abụọ. Ihe abụọ a na ihe ị na-eme nwere otu usoro mgbagha ahụ. Echere m na 5.5 na-arụ ọrụ ka mma iji kọwaa isi ihe gị. N'ebe ahụ ka m na-akọwa na ị nwere ike ịmezi ihe ọdịiche ahụ na-eme ka ọ dị ka etiti n'etiti akara dị ka isi ihe. Ọ bụrụ na ịnweghị akara na nlele gị maka 2nd cylinder, ị nwere ike ịmepụta nke gị onwe gị na sharpie na n'akụkụ nke ọzọ ma ọ bụ 180 degrees. Enwere naanị otu akara na isi stator.
Echere m na echeghị m gị ihe. Ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka, enwere m ike ịgosi gị ụfọdụ ọkachamara karịa m.
osụk site Matt on Fraị, 06 / 07 / 2019 - 19: 34
Daalụ maka azịza. M ...
Daalụ maka azịza. Echere m na enwere naanị otu ọnọdụ maka efere ihe eji eme ihe, n'ihi na njikọ ahụ na-atụgharị. N'ihe atụ abụọ (3.0 na 5.5), ị na-ekwu "Mgbe akara oge na flywheel dị n'agbata akara abụọ ahụ n'elu ogwe aka, ihe ga-emeghe ma ohm mita ga-agbanwe site na 0 ruo ohms na-enweghị ngwụcha." Mgbe akara njirimara dị n'ọnọdụ a, mita ahụ gụrụ efu. Ọ bụrụ na m na-efopụ nku ahụ (nlezianya), akpụkpọ ụkwụ nke isi na cam adịghị nso ebe dị elu, akara "Top". Ọ bụrụ na m na-eme ka ọkpụkpụ ahụ zuo ezu ka m kwaga efere ejiji, enwere m ike ịnweta nso Top, ma ọ bụghị n'elu.
Ọ na-adị m ka m na-emehie ihe dị njọ na usoro ahụ, n'ihi na o yiri ka ọ ga-agbatị n'ihu.
osụk site ttravis on Nọdụ, 06 / 08 / 2019 - 11: 10
Na zaghachi Daalụ maka azịza. M ... by Matt
Ị ma na ị nwere ...
Ị ma n'aka na ị nwere isi ihe maka moto ahụ? Naanị ịtụnanya.